giraanta xirxiraan - Shiinaha Wenzhou Dongyi Makiinado
giraanta goomahooda & giraanta xoqo saliidda
Ku xiridda shirka ushii
giraanta goomahooda & giraanta xoqo saliidda (giraanta masaxa daaqadda)
Shirkadda isku daraa tiro balaadhan oo ah qalabka macdan iyo non-macdan ah iyo noocyo kala duwan oo naqshado in shuruudaha lagu cabayn caadiga badan iyo sidoo kale kuwa gaar ah oo dhibaato la kulanto. kala duwan ee qalabka isticmaalaan Shirkadda waxaa laga heli karaa guud ahaan kala duwan ee kala duwan ee siddo xirxirida loogu talagalay quwad unidirectional iyo bidirectional, sibraar cadaadis hoose iyo quwad u nadiifisaa gaaska. Tani waxay sidoo kale waxaa ka mid ah-xawaaraha sare oo siddooyinkoodana wuxuu cadaadis sare, iyo sidoo kale rooti iyo goobo xaafuun naqshado. Ba ...
Shirkadda isku daraa tiro balaadhan oo ah qalabka macdan iyo non-macdan ah iyo noocyo kala duwan oo naqshado in shuruudaha lagu cabayn caadiga badan iyo sidoo kale kuwa gaar ah oo dhibaato la kulanto.
kala duwan ee qalabka isticmaalaan Shirkadda waxaa laga heli karaa guud ahaan kala duwan ee kala duwan ee siddo xirxirida loogu talagalay quwad unidirectional iyo bidirectional, sibraar cadaadis hoose iyo quwad u nadiifisaa gaaska. Tani waxay sidoo kale waxaa ka mid ah-xawaaraha sare oo siddooyinkoodana wuxuu cadaadis sare, iyo sidoo kale rooti iyo goobo xaafuun naqshado.
Basic xirxirida Ring naqshado:
Siddo seal jilitaanka / lammaane Single
Double siddo seal jilitaanka / lammaane
baxsadeen oo Cadaadis la naadi gargaarka
Xirxiraan Ring Qalabka:
CPI polymer Gaarka Alloys
bir ah ku tuura
Next: giraanta xoqo saliidda
3mm riixo Springs
Spring Gas hagaajin karo
Spring Cayrin Auto
Shiinaha Flat gariiradda Big jiidayasiuu Force Spring
Gariiradda riixo Spring
Gariiradda Springs Waayo, Sofa
Riixo gariiradda Spring
Down jeestay Gas Spring
Flat gariiradda Big jiidayasiuu Force Spring
Galvanized Steel Spring dharbaaxay Band
Spring Gas Waayo, Guddoomiyeyaasha Office
Gym Qalabka Spring
Large gariiradda Springs
Spring Gas xiri karo / Quful kor Gas
Pocket gariiradda Springs
Giringiriyey galvanized Steel Spring dharbaaxay Band
Small gariiradda Spring
Aarayo Power Spring
Spring Return Madax
Spring Madax Plate
Spring Steel dharbaaxay Band
Xiisadda gariiradda Springs
Toy riixo Spring
PTFE ceejinta giraanta
Dhuumaalaysiga giraanta ceejinta
giraanta xoqo saliidda
No.12 Gangsheng Rode, Konggang New Area, Degmada Longwan, Wenzhou City
Codsatay oo helay reciprocatin ku ...